Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa aApril | Zvazvino Zvinyorwa
Kusvika April, mwedzi wemabhuku uye chitubu chinenge par kugona. Uye sezvazviriwo zvakajairika vanosvika nhau dzekunyora. Hazvigoneke kuongorora ese kana akawanda seari, saka izvi zvinoenda kusarudzwa kwemazita matanhatu yetoni dzakasiyana uye vanyori vemarudzi akasiyana siyana. Mamwe mapara ane kudzidzira kubata, imwe nhoroondo uye matatu nhema-akachekwa.
1 Maitiro eVashambadziri - Petros Markaris
2 Víctor Ros uye zvakavanzika zvekumhiri kwemakungwa - Jerónimo Tristante
3 Nguva yemaznuts. Vana muhumambo hweRoma - José María Sánchez Galera
4 Kunyaradzwa - Karin Slaughter
5 Nyika Yemhuri - Sam Heughan naGraham McTavish
6 Rwendo rwekupedzisira - José Calvo Poyato
Maitiro evarimi - Petros Markaris
Ichangobuda, asi iyi nyowani kesi yemoto isina moto inowanikwa mumwedzi Costas Jaritos, uyo anofamba muAtene izere nevashambadzi vasina kutendeka. Kunyangwe achirarama hupenyu hwakanyarara nemukadzi wake, Jaritos anozofanira kutora mhosva yemhosva yekuuraya, sezvo chitunha chemupfumi weSaudi kuti iye akange aisa mari yakawanda muvhu kuvaka imba yemhando yepamusoro.
Victor Ros uye zvakavanzika zvekunze kwenyika - Jerónimo Tristante
Inspector anodzoka Victor Ros mune ino novel yakaiswa mumakore ekupedzisira e Kiyuba colonial.
Tiri muMadrid muna 1885 apo Ros anoshevedzwa naMaría Fuster, mudzimai wa Martin Roberts, shamwari yekare yemupurisa iye zvino anoshandira Spanish secret service uye ndiani yanyangarika pasina kana trace. Ros anozoona kuti kutsakatika uku kune chekuita naGiselda Albertos, anokwezva wekuCuba akasiyana muimbi. Saka Ros achaenda kuHavana, uko kwaachasangana nevasori vepasirese, vamiririri vaviri, veAmerica mabhizinesi, nemauto eSpain
Nguva yemaznuts. Vana muhumambo hweRoma - José María Sánchez Galera
Inonakidza kudzidza nezve hudiki muhumambo hweRoma. Ine pfungwa yekupindura mibvunzo nezve matoyi evana nemitambo Kana, semuenzaniso, zvavaimboita nemaoko mashoma walnuts. Anotaura zvakare nesu nezvekuti vakabatsira vabereki vavo kubasa kana nezvavakadzidza kuchikoro. Zvese zvinotsigirwa nemasampuli e la zvinyorwa, hunyanzvi uye zvekuchera matongo, kuziva kana vana vekare vekare uye avo vemazuva ano vanga vakasiyana kana kufanana.
Chinyararire - Karin Slaughter
Karin Slaughter anopa ino nyowani nyowani inotamba Will trent, ndiani ari kuongorora iyo umhondi yemusungwa panguva yemhirizhonga mutirongo. Mumwe wevasungwa anomuudza kuti iye haana mhosva kuna kurwisa pane izvo aigara ari mupomeri mukuru. Anosimbirira kuti zvese zvakarongwa nechikwata chemapurisa chine huwori, chinotungamirwa naJeffrey Tolliver, uye kuti honzeri chaiye anoramba aripo: mhondi yekupedzisira yakanangana nevakadzi kwemakore. Mutongi anoda kupupura, asi kuti adaro, Kuda anofanira kuvhurazve nyaya yaachatorera mupurisa akashongedzwa.
Uye zvakare, Trent ichafanirwa kuve nerubatsiro rwemunhu asingade kubatanidza: iyo Coroner Sara Linton, musikana wake uye chirikadzi yaTolliver.
Nyika yemhuri - Sam Heughan naGraham McTavish
Nemusoro wenyaya we Whisky, hondo uye chiitiko cheScotland chisina mumwe uye kuve nenyeredzi mbiri dzakateedzana sevanosaina Outlander, isu tiri pachena nezve izvo isu zvatinowana pane uyu mugwagwa rwendo kuyambuka Scotland.
En mobile home, vatambi vaviri neshamwari vanotanga rwendo rwekutsvaga nyika yavo. Vachatitorawo nechikepe, kayak, bhasikoro uye mudhudhudhu kuburikidza nenzvimbo dzekurota uye kuburikidza ne Nhoroondo uye tsika. Uye panguva imwecheteyo vanofunga nezve avo mabasa mufirimu uye theatre uye kuda kwavo nyika yavo.
Kune vateveri ve hit hit.
Rwendo rwekupedzisira - José Calvo Poyato
Ini ndinopedzisa ongororo nerino nyowani nemunyori wenhoroondo uye munyori José Calvo Poyato. Ndezve iyo kuenderera kwe Iyo isingaperi nzira, iyo inoongorora chimiro che Juan Sebastian Elcano, uyo muna 1522 akagamuchira jasi remaoko ane chirevo "Primus akandikomberedza" kubva mumaoko aCarlos I, uyo akamupa iye mushure mekuita denderedzwa rekutanga pasirese. Kuva mumwe wevafambisi vechikepe vanoremekedzwa kwazvo, akapihwawo mubhadharo wepenjeni, asi aisazogara pasi zviri nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Kusarudzwa kwemashoko ekunyora muna Kubvumbi